यसकारण फेसबुकले ‘लाइक’ सिस्टम हटाउदै, अब लाइक्स गर्न नपाइने::देश र जनताप्रति समर्पित
यसकारण फेसबुकले ‘लाइक’ सिस्टम हटाउदै, अब लाइक्स गर्न नपाइने
व्यापक आलोचनाका बाबजुद फेसबुक अहिले पनि विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सोसल मिडिया प्लाटफर्म हो । दैनिक करोडौँको संख्यामा भिडियो, फोटो तथा अन्य सामाग्रीहरु फेसबुकमा शेयर गरिन्छन् ।
फेसबुक प्रयोगकर्ताका लागि यसमा भएका अन्य धेरै फिचरहरुमध्ये ‘लाइक्स’ फिचर सबैभन्दा लोकप्रियमध्ये एक फिचर हो । फेसबुक पोष्टहरुको लोकप्रियता मापनका लागि यो एउटा मुख्य मापदण्डसमेत मान्ने गरिएको छ । अर्थात् फेसबुक पोष्टमा जति धेरै लाइक्स प्राप्त भयो उति नै धेरै उक्त पोष्ट लोकप्रिय रहेको मानिन्छ ।
तर अब भविष्यमा फेसबुकमा लाइक गर्न नपाइने भएको छ । किनकी फेसबुकले अब यो लाइक बटनलाई निकट भविष्यमै हटाउँदै छ । फेसबुक स्वयंले यसको पुष्टि गरेको छ । अहिलेबाटै लाइक बटन हटाउने कुराको फेसबुकले परीक्षण सुरु गर्दैछ ।
समाचारअनुसार परीक्षणको रुपमा प्रयोगकर्ताहरुले अब आफ्ना पोष्टमा केहीमात्रै लाइक्स देख्न पाउने छन् । अर्थात् अब फेसबुक पोष्टमा लाइक गर्नेहरुको सबै संख्या देखिने छैन । यसबाट फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो पोष्टमा आएका लाइक्सलाई अरुसँग दाँज्न छाड्नेछन् । जसका कारण बढी लाइक्स आउनेलाई लोकप्रिय तथा शक्तिशाली ठान्ने र आफ्ना पोष्टमा कम लाइक्स आएमा डिलिट गर्ने प्रवृत्ति पनि हट्ने विश्वास गरिएकेा छ ।
अहिले फेसबुकको एन्ड्रोइड एपको कोडमा यो फिचर राखिएको छ र प्रयोगकर्ताहरुका लागि सुरु गरिसकिएको छैन । फेसबुकले लाइक फिचर हटाउने परीक्षण कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिएको छैन ।
स्मरण रहोस् फेसबुकले यस्तै खालको फिचर इन्स्टाग्राममा पनि परीक्षण गरिसकेको छ । क्यानडा, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, आयरल्याण्ड र जापानका प्रयोगकर्तामा गरिएको उक्त परीक्षणको नतिजा के आयो भन्नेबारेमा अहिलेसमम सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अब आउने हुवावेका नयाँ स्मार्टफोनमा फेसबुक एपहरु नचल्ने,यस्ता छन कारण
कसरी भयाे ट्वीटरका प्रमुख ज्याककाे ट्विट ह्याक ?
मानिसकाे मृत्युपछि पनि शव चलिरहन्छ किन ? यस्तो भन्छन् बैज्ञानिक
बुटवलका युवाकाे अनाैठाे आबिस्कार तेल बिना नै चल्छ गाडी
भारतिय यान सम्पर्क बिहिन
राम्रोसँग कम्प्युटर र इन्टरनेट कसरी चलाउने ?अपनाउनुस यी आईडिया टिप्स
चीनद्वारा नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा निर्माण१० वटा ‘सेस्निक स्टेशन’ हस्तान्तरण पोखरा-नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा निर्माणका लागि चीनले सहयोग गरेको १० वटा ‘सेस्निक स्टेशन’ हस्तान्तरण गरेको छ । आइतवार राजधानीमा आयोजित नेपाल भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति सी चिनफिङ...
याँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी ए ५० एस प्रस्तुत सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी ए५०एस प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ ग्यालेक्सी ए५०एस मा अझै धेरै नवीनतम एवं आकर्षक विशेषताहरु नाइट मोड, सुपर स्टेडी...
पोखरा र काठमाडौं पछी ३२ जिल्लामा फोर जी सेवा विस्तार, यस्तो छ ग्राहकलाई आकर्षक प्याकेज पोखरा-नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारसँगै ग्राहकलाई आकर्षक इन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध गराउन टेलिकमले आज सातवटै प्रदेशका ३२ जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार गर्दै छ । यसअघि...